Ukuseta njani iiMargins zephepha kwiLizwi 2016
Iimpawu kwiLizwi 2016 amaxwebhu enza indawo yokubhaliweyo kwiphepha, ekhohlo, ekunene, phezulu nasezantsi. Banikezela igumbi phakathi kokubhaliweyo kunye nomda wephepha, eligcina isicatshulwa ukuba siphume kuxwebhu nakuyo yonke ikhompyuter.
ILizwi ngokuzenzekelayo liseta imida yamaphepha nge-intshi enye kwiphepha ngalinye. Uninzi lwabafundisi-ntsapho abangamaNgesi kunye nabahleli beencwadi bafuna imida yobukhulu kuba aba bantu bayathanda ukubhala eludinini. (Bade babhale ngaloo ndlela kwiphepha elingenanto.)
Ukulungelelanisa imida yamaphepha kwiLizwi, thobela la manyathelo:
Cofa indawo yoHlelo.
Cofa iqhosha leMargins.
Itholakala kwiqela lokuseta iphepha kwaye iboniswe apha.
Ukucofa amaqhosha Margin kubonisa imenyu egcwele ukhetho lwemajini eziqhelekileyo.
Hlanganisa ukulungiswa kwemida efanelekileyo kwimenyu.
Imida emitsha ichaphazela onke amaphepha kuxwebhu lwakho-ngaphandle kokuba wahlulahlula uxwebhu lube ngamacandelo, kwimeko apho olo tshintsho lusebenza kuphela kwicandelo langoku.
Ukhetho olukhoyo kuluhlu lwee-Margins zemenyu yoluhlu oluphezulu, ngasekhohlo, ezantsi nasekunene. Ewe, omane umda ubekwe ngexesha elinye. Xa ufuna ukuseta imida ethile, khetha i-Margin Custom ukusuka ezantsi kwimenyu, emva koko usebenzise i-Margins tab kwibhokisi yencoko yababini yokusetha iphepha ukuseta umda ngamnye.
Iqhosha le-Layout lamaqhosha okutsala aseta imida yamaphepha.
Iinkwenkwezi eziorenji ezibonakala kwimifanekiso yeeMargins zimele ukhetho oluthandwayo okanye lwamva nje olwenzileyo.
Uninzi lweeprinta alunakuprinta kwisiqingatha esingaphandle se-intshi yephepha, zihlala kwelinye icala-phezulu, ezantsi, ekhohlo, okanye ekunene. Esi sithuba ngu ngokupheleleyo umda; nangona ungaxelela iLizwi ukuba lisete umgama wee-intshi ezi-0, isicatshulwa asinakuprinta apho. Endaweni yoko, khetha ubuncinci bee-intshi ezingama-0.5 kuwo onke ama-margins.
Kuthatha ixesha elingakanani ukozela kwe-zyrtec
fumana kwaye ubeke endaweni yokugqwesa
ipilisi i-2 ngeenxa zonke
ukhula lwebhokhwe lokwenyani
ngecholesterol ephezulu kakhulu
ukubala ukuphambuka okumiselweyo ku-r